Propagandim-baolina izao | NewsMada
Par Taratra sur 12/11/2019
Miditra amin’ny herinandro faharoa, ankehitriny, ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna eto Madagasikara. Herinandro voalohany kosa hivondronan’ny mpilalaon’ny Barea de Madagascar hiatrika ny fifanintsanana ho an’ny «Can 2021». Tsy misy mpiraika aloha, hatreto, ny politika fa ny propagandim-baolina izao no ambentin-dresaky ny olona. Any amin’ny Barea avokoa izao ny sain’ny rehetra sy ny mason’ny mpitia fanatanjahantena ary ny mpankafy baolina kitra rehetra.
Hiverina hiakatra kianja afaka efatra andro mantsy ry zalahy, taorian’ny fahavitan’ny “Can 2019”. Efa liana ny hahita tava indray an’i Melvin Adrien, ilay mpiandry tsatoby malagasy, ireo tovovavy mpankafy sy mpanohana ity maherifo ity. Dodona ny hijery an’i Abel Anicet, kapiteny vaovaon’ny Barea de Madagascar, ihany koa ny rehetra. Maika ary te hanatrika ny famaranan’i Faneva Ima ny fiarahany farany amin’ny ekipam-pirenena malagasy ihany koa ny vahoaka. Ho propagandim-baolina ity herinandro ity ê!
Tsy misy tsy miresaka ity fihaonan’ny Barea de Madagascar sy i Etiopia, amin’ny asabotsy ity, ny daholobe. Na eny an’arabe na any an-tsekoly, na any anaty birao na eny an-tsena na any anaty fiara fitaterana, ny Barea de Madagascar sy i Nicolas Dupuis ary ry Dax sy ny namany avokoa no teny eny am-bavan’ny maro. Takona tanteraka ny resaka fifidianana ho ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina fa maresaka izao propagandim-baolina.
“Lojika izany”, hoy ny mpitazana. Ny Barea de Madagascar irery, hatreto, no hany afaka nampiray sy nampivondrona ary nampifankatia ny vahoaka malagay iray manontolo ka tsy nahitana loko politika na fihaviana na firazanana.
Na eo aza ny fanondrotana ny vidim-pidirana, tsy misy miferinaina fa Barea de Madagascar io. Ekipa efa nandresy ary mbola antenain’ny rehetra fa handresy koa hanaovana propagandim-baolina.